တစ်နှစ်သားအရွယ်တည်းက မိခင်ဖြစ်သူကမွေးစားဖို့ပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ငယ်ဘဝအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဦးခင်လှိုင် - ApannPyay Media
တစ်နှစ်သားအရွယ်တည်းက မိခင်ဖြစ်သူကမွေးစားဖို့ပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ငယ်ဘဝအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဦးခင်လှိုင်
November 19, 2020 by ApannPyay Media
ဟာသသရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီးခင်လှိုင်ကတော့ အင်မတန်လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါပဲနော်။ ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်ရအောင် သူ့ရဲ့အနုပညာအရည်အချင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ ခင်လှိုင်က ဒါရိုက်တာအဖြစ်ပါ ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခင်လှိုင်က သူ့ရဲ့သားလေးဇေရဲနဲ့ သမီးလေးသဇင်ထူးမြင့်တို့ကိုပါ အနုပညာအမွေတွေ လက်ဆင့်ကမ်းပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဦိးခင်လှိုင်ဟာ ငယ်ငယ်ထဲက မိဘတွေနဲ့အတူနေဖို့ ကံပါမလာတဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ သူ့ငယ်ဘဝအကြောင်းလေးကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ခင်လှိုင်ဟာ တစ်နှစ်သားအရွယ် ထဲက မိခင်ဖြစ်သူက မွေးစားမိဘတွေကို ပေးခြင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေကွဲချိန်မှာ အကိုကြီးနှစ်ယောက်ကိုတော့ မိခင်ကခေါ်သွားခဲ့ပြီး အငယ်ဆုံးသားလေး ဦးခင်လှိုင်ကိုတော့ မွေးစားမိဘတွေလက်ထဲပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်လှိုင်မှာ ၂ နှစ်စီကြီးကြတဲ့ အကိုနှစ်ယောက်ရှိသေးကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ ငယ်ဘဝဟာ အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဦးခင်လှိုင်ကိုမမွေးစားခင်အချိန်က မွေးစားမိဘတွေကစီးပွားရေးအဆင်ပြေကြပြီး ဦးခင်လှိုင်ကိုမွေးချိန်မှ စီးပွားရေး ထိခိုက်ပြီး အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွေးစားမိဘတွေက ခင်လှိုင်ကိုသား သမီးအရင်းလိုချစ်တဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။ မိခင်အရင်းဖြစ်သူနဲ့ ပြန်တွေ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုလဲ ပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြလာပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝမ်းနည်းစရာ ငယ်ဘဝအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တစ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္တည္းက မိခင္ျဖစ္သူကေမြးစားဖို႔ေပးျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ဝမ္းနည္းစရာ ငယ္ဘဝအေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ ဦးခင္လႈိင္
ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသားႀကီးခင္လႈိင္ကေတာ့ အင္မတန္လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပါပဲေနာ္။ ပရိသတ္ေတြကို ရယ္ေမာေပ်ာ္႐ႊင္ရေအာင္ သူ႔ရဲ႕အႏုပညာအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ေလ့ရွိတဲ့ ခင္လႈိင္က ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ပါ ဇာတ္ကားေတြ႐ိုက္ကူးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခင္လႈိင္က သူ႔ရဲ႕သားေလးေဇရဲနဲ႔ သမီးေလးသဇင္ထူးျမင့္တို႔ကိုပါ အႏုပညာအေမြေတြ လက္ဆင့္ကမ္းေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒီလိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားစု ဘဝေလးပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဦိးခင္လႈိင္ဟာ ငယ္ငယ္ထဲက မိဘေတြနဲ႔အတူေနဖို႔ ကံပါမလာတဲ့ ဝမ္းနည္းစရာ သူ႔ငယ္ဘဝအေၾကာင္းေလးကိုေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။ ခင္လႈိင္ဟာ တစ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္ ထဲက မိခင္ျဖစ္သူက ေမြးစားမိဘေတြကို ေပးျခင္းခံခဲ့ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိဘေတြကြဲခ်ိန္မွာ အကိုႀကီးႏွစ္ေယာက္ကိုေတာ့ မိခင္ကေခၚသြားခဲ့ၿပီး အငယ္ဆုံးသားေလး ဦးခင္လႈိင္ကိုေတာ့ ေမြးစားမိဘေတြလက္ထဲေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္လႈိင္မွာ ၂ ႏွစ္စီႀကီးၾကတဲ့ အကိုႏွစ္ေယာက္ရွိေသးေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဦးခင္လႈိင္ရဲ႕ ငယ္ဘဝဟာ အဆင္ေျပေျပေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဦးခင္လႈိင္ကိုမေမြးစားခင္အခ်ိန္က ေမြးစားမိဘေတြကစီးပြားေရးအဆင္ေျပၾကၿပီး ဦးခင္လႈိင္ကိုေမြးခ်ိန္မွ စီးပြားေရး ထိခိုက္ၿပီး အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမြးစားမိဘေတြက ခင္လႈိင္ကိုသား သမီးအရင္းလိုခ်စ္တဲ့အေၾကာင္းေျပာလာခဲ့ပါတယ္။ မိခင္အရင္းျဖစ္သူနဲ႔ ျပန္ေတြ႕တဲ့အေၾကာင္းေလးကိုလဲ ပရိသတ္ႀကီးကိုေျပာျပလာပါေသးတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာ ငယ္ဘဝအေၾကာင္းေျပာျပလာတဲ့ဦးခင္လႈိင္ရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
စီးပွားဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝစေရန် မဟာလာဘံ လာဘ်ဖွင့် ကန်တော့ပွဲထိုးနည်း .
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ငွေကြေး အစဉ်ပြေစေရန် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်အဓိဌာန်နည်း .
အိမ်ဆောက်ရင် သိထားရမယ့် လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ သစ်ဆက်နည်းအကြောင်း..
ဒီနိမိတ်တွေသာတွေ့ရင် ထီဆိုင်ဘယ်မှာရှိလဲ ချက်ချင်းရှာပြီးတော့သာထိုးပေတော့ ချက်ချင်းနော်
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာကလူငယ်လေးများရဲ့ ဇာတ်သဘင်တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ
ကိုဗစ်ပညာပေးသီချင်းနဲ့ မြန်မာတင်မက အာရှအထိပေါက်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်မချောချောလေး
ဖတ်ဖူးလား ကြက်နဲ့သိမ်းငှက် အကြောင်း
မျက်နှာအသားရေပျက်စီးနိုင်လို့ မျက်နှာအရေပြားပေါ်မှာ လုံးဝ မသုံးသင့်တဲ့ ပစ္စည်း(၅)မျိုး
ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အန္တရာယ်မရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး လက္ခဏာများ
© 2021 ApannPyay Media • Built with GeneratePress